UTendai Ndoro Ukhokhela Engalaneni Yokuhlohla Amabhola Amanengi kuPSL Lonyaka
Lwezi 21, 2013
BULAWAYO — Umgadli okhangelelwe ukugcotshwa njengomdlali ohlohle amabhola amanengi okwedlula abanye lonyaka esigabeni se Castle Premier Soccer League uTendai Ndoro uthi uzimisele ukuqhubekela phambili ehlohla ekubuyeleni kwakhe kuqembu le Mpumalanga Black Aces lase South Africa.
UNdoro, oleminyaka engamatshumi amabili lanhlanu yokuzalwa uthengwe, liqembu le Mpumalanga Black Aces elidlala esigabeni kwele South Africa lona eliphinde lamboleka iqembu athengwe kulo ele Chicken Inn ngemva kokuba amaphepha akhe omsebenzi engalungiswanga kusase lesikhathi.
UNdoro uthi uzabhekisa amabombo kwele South Africa esephindela kuqembu le Mpumalanga Black Aces njalo isifiso sakhe ngesokuba aqhubekele phambili ewatshayela amambuleni.
Lumdlali ubesuke kuleli ehlohle imiklomelo elitshumi lanye kwathi ekuphendukeni kwakhe ufike wakhuphukisa lelonani laya kumiklomelo elitshumi lathobaminwe mbili (18) njalo ulakho ukwengeza kulelonani uma engahlohla emdlalweni wokucina weqembu lakhe ngempela viki ezayo.
UNdoro uthi ubelethuba lokuyadlalela amaqembu alodumo kwele South Africa kodwa ukhethe ukuyadlala eqenjini elincane lapho angasoze athwaliswe nzima ngabalandeli njengalokhu okwenzakala kumaqembu amakhulu.
Lumdlali uthi abagadli asebenze labo ekuphendukeni kwakhe kweleZimbabwe abagoqela uPhilani Ncube, umuyi uAdam Ndlovu kanye lo Mandla Mpofu yibo abamlole ukuba atshaye kanje amambule.